२ दिनको लागि एक महिलालाई प्रेमी चाहियो, त्यसको लागि १ लाख भन्दा बढी रकम पनि पाइने ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय२ दिनको लागि एक महिलालाई प्रेमी चाहियो, त्यसको लागि १ लाख भन्दा बढी रकम पनि पाइने !
दुई दिनसम्म उनकी सासुसँगै बस्ने यस व्यक्तिलाई १ हजार अमेरिकी डलर दिइनेछ। न्यू योर्कको हडसन उपत्यकाकी ति महिलाले सोसल मिडियामा पोस्ट गरेको एउटा विज्ञापनमा भनिएको छ कि उनलाई विवाहको लागि र भोजमा उपस्थित हुन उनको ५१ वर्षीया सासुको लागि साथी खोजेकी हुन्।
दुई दिनसम्म उनी आफ्नी सासुसँग बसिदिनु पर्यो, जसका लागि उनले एक हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली १ लाख भन्दा बढी रूपैयाँ दिने बाचा गरेकी छन्। वास्तवमा ति महिलाले कुनै विवाह समारोहमा जादै छिन, जसको लागि उनी आफ्नी सासुलाई पनि साथमा लिएर जान चाहन्छिन्।
मेरी सासु एक राम्रो डान्सर हुन् र बोल्न पनि राम्रो छिन्। सोसल मिडियामा यो विज्ञापन देखेपछि, प्रयोगकर्ताहरूबाट धेरै टिप्पणीहरू आएका छन्। कसै-कसैले लेखेका छन् कि यो शानदार र रमाइलो छ छ, जबकि एक प्रयोगकर्ताले यसको लागि एक व्यक्तिलाई सिफारिस पनि गरेको छ।